Maxamed Cumar Carte “Shaqo hufan ayaa laga rabaa shaqaalaha Xafiiska R/wasaaraha” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxamed Cumar Carte “Shaqo hufan ayaa laga rabaa shaqaalaha Xafiiska R/wasaaraha”
A warsame 14 February 2015 14 February 2015
Muqdisho, 14, Feb, 2015…Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cumar Carte ayaa kulan la qaatay Agaasime Waaxeedyada Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, iyadoo kulan diiradda lagu saaray sidii wada shaqayn buuxda iyo is faham u dhex mari lahaa maamulka sare iyo waaxayaha kala duwan ee xafiiska.
Ugu horeyn, waxaa kulanka ka hadlay Xog-hayaha joogtada ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Maxamed Cali Nuur, wuuxuuna sheegay in la joogo xiligii xafiiska wax laga qaban lahaa, maadaama ay soo dhamaatay dhismahii xukuumadda iyo ansixinteedii, sidaas daraadeedna hadda kadib loosoo wada jeesan doono sidii dib u habayn ballaaran loogu sameyn lahaa habsami u socodka shaqada xafiiska R/Wasaaraha.
Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Ra’iisul Wasaare ku xigeen, Maxamed Cumar Carte, ayaa ku booriyay in shaqaaluhu la yimaadaan shaqo hufan isla markaana ay sii xoojiyaan shaqooyinka xafiiska, isagoona tilmamaay wixii hadda ka danbeeya in qof waliba lagula xisaabtamayo waxa uu qabto.
“Kulankaani ma noqon doono midkii ugu danbeeyay ee wuu sii socon doonaa, ujjeedka aan maanta u qabanayna waa in aan isbarano, dhagaystana tabashooyinkiina, isla markaana laga wada hadlo sidii kor loogu qaadi shaqada xafiiska oo laf dhabar u ah maamulka dowladnimo, ayna u noqoto tusaale wanaagsan wasaaradaha dowladu. Waxaana dib-u-habeyn lagu sameynayaa maamulka iyo shaqalaha xafiiska, qof walba oo kasoo baxa waajibaadka saarana wuxuu heli doonaa xuquuqda uu leeyahay” ayuu yiri R/Wasaare ku xigeenku.
Ugu danbeyn, Agaasimayaasha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaare ku xigeenka tallo soo jeedintiisa ku aadan in dib u habayn ballaaran lagu sameeyo shaqada xafiiska, ayna diyaar u yihiin in ay kala qayb qaataan sidii loo hirgelin.
Xildhibaan horay uga tirsanaa baarlamanka Kenya oo la dilay
Qaadkii la geyn jiray Soomaaliya oo maanta la joojinayo (Maxaa soo kordhay?)